Taariikh Nololeedka Maxamed Cabdulahi Maxamed Farmaajo – The official Somali Historical
Maxamed Cabdulahi Maxamed Farmaajo waxuu dhashay sanadkii 1962-kii. Waxaa uu ku dhashay magaalada Muqdisho.
Waxbarasho: waxbarashadiisa Dugsi Hoose waxaa ku qaatay Dugsigii Forta Sheekh ee Muqdisho. Dugsiga Dhexe waxaa uu ku qaatay Dugsigii Dhexe ee Maxamuud Xarbi. Dugsiga Sare waxaa uu ku qaatay Dugsigii Sare ee Farsamada Gacanta ee Lafoole ee uu ka qalin jebiyay 1980-kii.
Shaqo:sanadkii 1982-kii waxaa uu shaqo ka bilaabay Wasaaradii Arimaha Dibada ee uu markaasi uu Wasiirkii Arimaha Dibada uu ka ahaa Cabdiraxmaan Jaamac Barre oo ay walaalo ahaayeen Jeneraal Maxamed Siyaad Barre.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa uu ka hawlgeli jiray Qeybta Keydka Dhexe (Central Archive) ee Wasaarada Arimaha Dibada.
Mudo yar kadib waxaa loo soo wareejiyay Xafiiska Maamulka Lacagta, isagoo ka noqday Xisaabiye.
Sanadkii 1985-kii waxaa loo magacaabay Xoghayeha 1aad ee Safaarada Soomaaliya ee Washington, D.C. ee dalka Mareykanka, kadib markii lagu helay dembi ay galeen isaga iyo labo kale oo midkood markaasi xernaa .
Safaarada Soomaaliya waxaa uu ka shaqeynayay ilaa iyo sanadkii 1988-kii, kadibna waxaa uu galay waxbarasho sanadihii u dhexeeyay 1989-kii ilaa iyo 1993-kii, isagoo markaasi shahaadadii 1aad (Bachelor of Arts) ee Jaamacada ku qaatay taariikhda.
Sanadkii 1989-kii waxaa uu bilaabay waxbarasho kadib markii uu magangelyo weydistay Mareykanka, wuxuuna waxbarashadii dhameeyay 1993-kii; isagoona markaasi qaatay shahaadadii 1aad (Bachelor of Arts) ee Jaamacada ee uu ku qaatay Maadada Taariikhda.
Sanadkii 2009-kii waxaa uu Farmaajo qaatay Shahaadada Jaamacadeed ee (Master of Arts) by Mohamed A. Mohamed, 01 June 2009
Xilka Ra’isulwasaare: 14-kii Oktoobar, sanadkii 2010-kii waxaa loo magacaabay Ra’isulwasaare Dowladda Soomaaliya
somali-prime-minister-mohamed sida uu ku noqday Ra’isulwasaare.
19-kii Juunyo, sanadkii 2011-kii waxaa uu iska casilay Xilkii Ra’isulwasaae Halkan Riix
si aad u aqriso Warbixintii Laga Qoray Mudadii Uu Ra’isulwasaaraha Ahaa.
8-dii Febraayo, sanadkan 2017-ka, Maxamed Cabdullaahi Maxamed Faarmaajo waxaa loo doortay Madaxweynaha Soomaaliya.
Previous: Taariikh nololeedkii abwaan mohamed xaashi dhamac gaariye oo kooban